'Imaltoonni loltuun dabaalamuun socha'u'-Jiiddugala Gondar - BBC News Afaan Oromoo
Godina Jiddugala Gondar keessattuu naannawa Cilgaatti walitti bu'iinsa koree deebiiftoota gaaffii eenyummaa saba Qimaantiifi humnoota nageenyaa motummaa jidduutti uumamee tureen naannichatti kenni tajaajilaafi daandiiwwan adda citee ture.
Tibbana Jiddugala Gondar aanaalee sadii keessatti sochiileen haawaasaa fi dinagdee kan dhaabbate yoo ta'u, haalli walitti bu'iinsaa garuu dhaabbachu ibsameera.
Itti gaafatamaa Waajjira Kominikeeshinii Godina Jiddugala Gondar, Obbo Haabtamu Geetaahun BBC'tti akka himaniitti naannowwan walitti bu'iinsi keessatti uumamee ture keessaa yoo xinnaate aanaalee sadiitti sochiileen hawaasaafi dinagdee dhaabbateera.
Obbo Habtaamuun BBC Afaan Amaaraatti akka himaniitti, ''Godinichatti aanaalee sadiin ala sochiileen hawaas-dinagdee hin gufanne.''
Aanaalee sochii keessatti daangeeffamee sadaniis Cilgaa Duraa, Cilgaa Haaraa (kan bulchiinsa ofiin of bulchuu Qimaantiitti daangeeffame) fi Magaalaa Ayikal ta'u himaniiru.
Rakkina uumamee ture hiikuuf atattamaan hojjatamu kan ibsan Obbo Habtaamuun, gama tajaajila geejjibaa ilaaluun Gondarii hanga Mattamaatti guyyaatti olanii galuuf imalli lama jiraachu himu.
''Konkolaattonni raawwaan dabaalamanii kan deddeebii'an yoo ta'u, ganama Gondarii- Matammaa deemuun galgala gara Gondariitti deebi'u'' jedheera.
Aanaalee sadan keessatti garuu geejibni uummataa gutuummaa guuttuutti kan dhaabbate yoo ta'u, sababiin deebi'ee hineegaliiniifis ''rakkinichi haalaa walitti fufiinsa qabuun waan hinhikamneefi abbootiin qabeenyaas soodaa qabeenyi nu jalaa barbadaa'a jedhu garasitti bobbaasuuf fedhii waan hinqabaanneefiidha'' jedhaniiru Obbo Haabtaamuun.
Daandileen Jiddugala akka Tikil Dingaayi gadii gara Taachi Harmaacoofi Xagadee geessan dabaalamu waraanaa osoo hinbarbaachifne tajaajila kennaa jiraachuu ibsaniiru.
Haaluma tibbanaatiin walqabatees barattoonni gara yunivarsiitii Gondariitti imalaa turan to'atamuunsaanii midiyaalee hawaasarra tamsa'aa tureera. Obbo Habtaamuun garuu odeeffannichi dhara ta'u himaniiru.
''Siriiyyuu barattoonni osoo rakkinni wayitu isaan hinmudatiin gara yunivarsiitii itti ramadaman akka dhaqaniif yaaliifi deeggarsii taasifamaafi jira,'' jedhaniiru.
Wayita ammaa kanattis aanaalee sadeen keessattu jiraattota birraatti sardamni jiraachuu kan dubbatan ittigaafatamaan kun, ''akka waliigalaatti godinicha keessatti waliitti bu'insi kamiyyu hinjiru'' jechaniiru.
Walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namootaa baduun himamullee, lakkoofsa namoota ajjeefamaniifi hammantaa qabeenyaa barbadaa'ee himuuf akka rakkisu dubbatan.
Ragaa kana argachuuf yaaliin bilbilaa Poolisii godinichaatti taasifne osoo nuuf hinmilkaa'iin hafeera.